Suarez oo ka hadlay suurtogalnimada ay markale ku midoobi karaan xiddigaha MSN – Gool FM
(Spain) 18 Juunyo 2019. Weeraryahanka reer Uruguay ee Luis Suarez ayaa soo dhaweeyay dib ugu soo laabashada Neymar Jr ee kooxda Barcelona inta lagu gudi suuqan xagaaga, isagoo sheegay in qof walba uu ku faraxsan yahay xirfadiisa cajiibka ah.
Waxaa sii korodhay wararka ku saabsan in Neymar uu ku laabanayo garoonka Cump Nou, kaddib markii uu kooxda PSG ugu biiray heshiiskii ugu qaalisanaa taariikhda kubadda cagta xagaagii 2017.
Xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr ayaa lala xiriirinayaa inuu ka tagayo Paris Saint-Germain xagaagan si uu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Barcelona ama xitaa uu ku biiri karo Real Madrid, iyadoo wararka xanta ah sii xoogeysanayaan kaddib hadalada kasoo yeeray madaxweynaha kooxda PSG ee Nasser Al-Khelaifi.
Wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa daboolka ka qaaday erayadii uu kaga hadlay Suarez wararka ku aadan in Neymar Jr uu dib ugu soo laabanayo Cump Nou, wuxuuna yiri:
“Waxaan ku soo qaatay sanadihii ugu fiicnaa nolosheyda kooxda Barcelona, waxaan la ciyaaray xiddigaha adduunka ugu fiican, Messi, iyo Neymar oo ahaa laacibka labaad ee ugu fiicanaa xiligaas”.
“Soo laabashadiisa? Yaan dooneynin inuu ku raaxaysto ciyaaryahan sida Neymar?, taasi waa waxa ay kaga hadlaan suuqa, laakiin haatan wuxuu ka tirsan yahay Paris St Germain”.
“Waxaan ka dhihi lahaa Antoine Griezmann, wixii aan iri sanadkii hore, waa ciyaaryahan leh tayo sare, laakiin waa ciyaaryahan ka tirsan kooxda Atletico Madrid, mana jiraan wax intaas ka fiican ee aan sheegi karo”.